काठमाडौं : धितोपत्र बजारका दुई नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दुवै नेतृत्वविहीन बनेको अवस्था छ । पुँजी बजार सम्बन्धित यी २ संस्था नेतृत्वविहीन बनेसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि दौडधूपसमेत सुरु भएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) चन्द्रसिंह साउदले पारिवारिक सदस्यका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको भेटिएपछि धितोपत्र बाजार सञ्चालक र नियामक दुवै नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
योसँगै अहिले धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षको लागि आवेदन खुला गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । अबको केही दिनमा नै नयाँ अध्यक्ष छनोटका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गर्छ ।’
बोर्ड अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र बजार विज्ञ सहितको समिति गठन हुने कानुनी प्रवधान रहेको छ । सोही प्रवधानअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गर्न लागेको हो । समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरुको आवेदन माग गरिनेछ ।
कसरी नियुक्ति गरिन्छ धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष ?
उक्त समितिले दाबेदारहरुमध्ये बाट कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । ती ३ जना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । बोर्ड अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा रहेको छ ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दौडधुप सुरु
नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वबिहीन बनेसँगै अध्यक्षका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डको प्रमुख बनाइदिन आग्रह गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरु मन्त्रालय आउने गरेका छन् । ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारका दुवै संस्थाको प्रमुख हुने अभिलाषासहित भेटघाट गर्ने क्रम बाक्लिएको छ’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तथापि, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि केही कानुनी कुरा मिल्नुपर्ने भएकाले अहिले नै आवेदन माग गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाई छ । यसरी मन्त्रालय धाउनेमा केही पुँजी बजारका परिचित अनुहार छन् भने केही यो क्षेत्र भन्दा बाहिरको पनि रहेका छन् ।’ ‘प्रारम्भिक चरणकै भेटघाट रहेको र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको छानिबन चलिरहेकाले अहिले नै आकांक्षीहरुको नाम सार्वजनिक गरिनहाल्यौं,’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीले भने ।
मन्त्री, सचिवसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई फोन गराउने र विभिन्न च्यानलमात्र भेटघाट गर्नेक्रम पनि सुरु भएको स्रोतको भनाई छ । यसैगरी, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी पद पनि अहिले रिक्त रहेको छ । यस पदको पूर्तिका लागि पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । सम्भवतः दुवै निकायहरुको नेतृत्व छनोट लगभग सँगसँगै जस्तो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
तर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले अदालत गुहारेकाले उनको मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई केही गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ । तर नेप्से प्रमुखका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन भने कुनै पनि कानुनी समस्या रहेको छैन । यसआधारमा नेप्से नेतृत्व अझै अघि चयन हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि छ ।
२६०० विन्दु नजिक आएर फर्कियो नेप्से
सिक्लेस हाइड्रोपावर आइपीओ अनुमति माग्न धितोपत्र बोर्ड पुग्यो
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड २ को न्याभ कति ?
जापान र दक्षिण कोरियाबाट जाने यात्रुलाई अष्ट्रेलियाले डिसेम्बर १५ सम्म प्रतिबन्ध लगाउने
समिट लघुवित्तको बोनस सेयर घोषणा
लघुवित्त कम्पनीहरुमा लाभांश चहलपहल : ३५ कम्पनीको घोषणा, कुनको कति ?